Semalt Inotsanangura Maitiro Okurwisa Botnet Malware
Kushandiswa kwemabhaketani chinhu chinoshamisa. Kushandiswa kwavo mukurwisana kwemakore gumi ekupedzisira kwakaguma nekukuvadza kunodhura kwevanotambudzwa. Nokudaro, kune zvakawanda zvakaedza kuchengetedza zvinopesana ne botnet malware, kana kuvadzivisa zvachose pose pose zvichibvira.
Ivan Konovalov, uyo Semalt nyanzvi, anotsanangura kuti izwi rokuti botnet rine mazwi maviri: Bot, iyo inoreva kombiyuta ine utachiona hweHIV, uye Net iyo inongororwa yehutano hwakabatana pamwe chete - istick melo with melo 4. Hazvibviri kune vanhu vanokura nekudzivirira malware kuti vashandise makombiyuta avo vanonyorera mumunhu. Izvo, saka, zvinoguma nekushandisa mabhota anozviita saizvozvo. Iyo malware inoshandisa network kuti ipararire kune mamwe makombiyuta.
Apo kombiyuta yako inotapukirwa ne-malware uye inova chikamu chebhodeni, uyo anoritora anogona kuita zvidzidzo kumashure kure. Izvi zvinogona kunge zvisingaoneki kune vanhu vachishandisa bandwidth yepasi yepasi. Chinhu chinorwisa-malware ndiyo nzira yakanakisisa yekuona kuvepo kwemarware. Zvichida, vashandi ve-tech-savvy vanogona kutarisa mapurogiramu iye zvino ari kushanda kana kuiswa pane system.
Botnet ndiro basa romunhu ane chinangwa chakaipa. Zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana zvakadai sokutumira spam uye kuba mashoko. Iyo yakakura nhamba ye "bots" mune imwe, ndiyo inonyanya kukosha iyo inogona kukonzera. Semuenzaniso, mapoka emagandanga ehurongwa anoshandisa mabhota kuti ape ruzivo rwezvemari kuti aite unyengeri, kana kutsvaga vashandisi vasingafungi uye vanoshandisa ruzivo rwakasvibiswa zvisiri pamutemo kuti avatsakatise.
Murairo uye wekutora sevha inoshanda seyiyo inopinda munharaunda kubva kune mamwe makombiyuta anowanirana kune network. Kune vakawanda mabhota, kana mutemo nekutarisira sevha ichivhara pasi, yose botnet inowira. Pane zvimwe zvisiri izvo kune izvi, zvisinei. Yokutanga ndiyo iyo mabhodetsiti anoshandisa peer-to-peer kutaurirana uye haana mutemo uye chengeta server. Yechipiri ndiyo mabhota ane mirairo inopfuura imwechete uye mavhareji ekutonga ari munyika dzakasiyana..Zvakanyanya kuvhiringidza kug kugadzirisa tsanangudzo iyi.
Njodzi imwechete iyo vanhu vanovhunduka kubva kumapurogiramu e-malware anoshandawo kune mabhota. Kuvhiringidzika kwakawanda ndekubira mashoko ane ruzivo, kuwandisa mavhareji webhusaiti nechinangwa chokuvaderedza kana kutumira spam. Makombiyuta ane hutachiwana ayo ari chikamu chebhokisi haisi wedziri. Uyo anorwisa anobva achimhanya uye kakawanda nokuda kwezvinhu zvisiri pamutemo.
Botnets inotyisa kune zvose zvishandisirwo uye zvigadzirwa zvemunhu. Kunyange zvakadaro, zvigadzirwa zvemakambani zvine utano hwakanaka hwekuchengetedza uye kuongorora mitemo. Zvinopera pasina kutaura kuti vane dambudziko rakawanda rekuchengetedza.
Hapana rimwe boka rinowanzoshungurudzwa kupfuura rimwe. Izwi rejaira rinoshandiswa rinogona kutora maitiro akasiyana zvichienderana nechinangwa cheboka.
Conficker ndiyo yakakosha botnet iye zvino pakanyorwa sezvo yaizivikanwa kuti inopedza makombiyuta nokukurumidza. Zvisinei, vashandi havana kumbofanira kuishandisa nekuda kwekuwedzera kwekucherechedza uye kuongororwa kunokwezva kubva munharaunda yekutsvakurudza. Zvimwe zvinosanganisira Dutu uye TDSS.
ESET ichangobva kuwana botnet muongororo yavo muOp Operation Windigo. Yakanga iine utachiona hwemaseri 25 000. Chinangwa chayo chaiva chekuendesa zvinyorwa zvinonyangadza kuvakombiyuta emashandisi, kubika zvibvumirano zvavo, uye kutumira mameseji e-spam kune vanofonera pamakombiyuta.
Hapana rimwe chete rinoshandiswa rakachengeteka kubva kurwisana ne software yakaipa. Vanhu vanoshandisa madivayiri eMackie vanonyatsoziva neBlackback malware.
Kudzivirira Kupikisana neBotnets
Purogiramu inorwisa-malware ndiyo nzvimbo inotanga pakurwisa mabhota. Kuziva kuti zvinokonzerwa nemamware mu network network zviri nyore.
Kurudzira kuziva uye kudzidzisa vanhu pamusoro pekutyisidzira. Vanhu vanoda kuziva kuti makombiyuta ane hutachiona anokanganisa ivo nevamwe.
Tora makombiyuta ane hutachiona husina kukwana uye tungamira zvakakwana pamatokari kuti ave nechokwadi chokuti vakachena.
Kushandira pamwe kubva kuvashandisi, vatsvakurudzi, ISP, uye zviremera.